Tora kunyura mudziva repingi, Lake Hillier | Absolut Kufamba
Mufananidzo | Wallpapercave
Planet Pasi inzvimbo inonakidza isingaregi kutishamisa. Waizviziva here kuti kuAustralia kune dhamu rine mvura inopenya pink? Iri ndiro Lake Hillier, dziva risinganzwisisike rakatangira kuMiddle Island, chitsuwa chikuru kwazvo muzvitsuwa zveAustralia zveLa Recherche.
Kuwana iyo nzvimbo iripo Lake Hillier hakusi nyore. Havasi vanhu vazhinji vakave nemukana wekuzviona ivo pachavo nekuti nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza nharaunda, zvakanyanya iwe unogona kungobhururuka pamusoro pechitsuwa kuti uone gungwa riri muchikepe helikopta iyo inosimuka zuva nezuva kubva kuEsperance airport.
Kana mune ramangwana iwe ungade kutora rwendo kuenda kuAustralia kuti uzive ayo akanaka nharaunda, ayo mamiro uye nzvimbo dzakasarudzika senge Lake HillierIpapo ini ndichazokuudza zvakadzama zvese nezve ino yakanaka pink lagoon.
1 Chii chinonzi Lake Hillier?
2 Ndiani akawana Lake Hillier?
3 Lake Hillier yakawanikwa sei?
4 Nei mvura iri muLake Hillier pink?
5 Ungashanyira sei Lake Hillier?
6 Mamwe makungwa akasarudzika pasirese
6.1 Gungwa reClicos (Spain)
6.4 Nyanza Natron (Tanzania)
Chii chinonzi Lake Hillier?
Hillier Lake inoshamisa mazana matanhatu emamirimita murefu bubblegum pink dhamu paMiddle Island, chitsuwa chikuru muLa Recherche archipelago muWestern Australia, musango rine nzvimbo yakaoma kuwana. Yakave inozivikanwa pasirese nekuda kweiyo yakasarudzika ruvara rweayo mvura, izvo zvinoita kuti ive chaizvo instagrammable. Chiitiko chinoshamisa chekuona!
Mufananidzo | Enda Unodzidza Australia
Ndiani akawana Lake Hillier?
Kuwanikwa kweLake Hillier muAustralia yakagadzirwa nemunyori weBritish mapuratifomu uye mufambisi wengarava Matthew Flinders muzana ramakore XVIII. Mufambi uyo akazozivikanwa nekuda kwekuva wekutanga kutenderera chitsuwa chihombe cheAustralia uye aive munyori wemabhuku akakosha ekutsvagisa, mazhinji acho akazvipira kuOceania. Kondinendi ine mukati mayo mune mamwe akanyanya uye akanaka akasiyana echisikigo pasirese.
Lake Hillier yakawanikwa sei?
Pazuva rerwendo kuenda kuMiddle Island, Flinders akafunga kukwira kuenda pakakwirira kwazvo kuitira kuti akwanise kuongorora zvakatenderedza. Ipapo ndipo paakatoshamiswa nemufananidzo usingadaviriki wakaonekwa pamberi pemeso ake: iro regungwa rakapenya repingi rakakomberedzwa nejecha nesango.
Mumwe muongorori akashinga, John Thistle kaputeni wengarava yekufambisa, haana kuzeza kuenda kudziva iro pacharo kuti aone kana izvo zvaakaona zvaive zvechokwadi kana musvinu. Paakasvika padhuze akashamisika zvikuru uye haana kuzeza tora sampu yemvura kubva kuLake Hillier kuti uratidze kune vamwe shamwari dzako. Yakaramba ichichengetedza yayo isingazivikanwe bubblegum pink color kunyangwe kunze kwegungwa. Zvingarevei?
Nei mvura iri muLake Hillier pink?
Ndicho chakavanzika chikuru cheLake Hillier icho Hapana akambokwanisa kuburitsa zana% ndicho chikonzero nei mvura dzacho dziri dzepingi. Vazhinji vaongorori vanofunga kuti dziva rine hue iyi nekuda kwebhakitiriya iri muchikamu chemunyu. Vamwewo vanoti honzeri yacho musanganiswa weHalobactoria uye Dunaliella salina. Panyaya iyi pachine kusabvumirana kwesainzi saka zvikonzero zvinoramba zvakavanzika.
Ungashanyira sei Lake Hillier?
Yakataura kuti Lake Hillier iri paMiddle Island, chitsuwa chikuru kwazvo muzvitsuwa zveAustralia zveLa Recherche. Sezvo kuwana kwakaomesesa, Kushanya kudziva iri kunogona kuitwa chete nekubhururuka pamusoro penzvimbo neherikoputa kubva kuEsperance airport. Icho chiitiko chinodhura, asi zvakare chiitiko chakati.
Mamwe makungwa akasarudzika pasirese
Mufananidzo | Rauletemunoz yeWikipedia
Madziva akaita seMichigan, Titicaca, Tanganyika, Victoria kana Baikal ndiwo mamwe emadhamu anozivikanwa pasi rese.
Nekudaro, kumakondinendi ese kune zvimwe zvisingazivikanwe kukosheswa kwemvura zvinovhenekera nechiedza chavo pachavo nekuda kwehunhu hwavo hwepakutanga, kungave nekuda kwekuumbwa kwemvura yavo, iko kuita kwekushisa kwakanyanya pavari kana zvipenyu zvinogara mazviri. Saka, Pasi pose pane makungwa akanaka emarudzi akasiyana-siyana akakodzera kushanyira.
Gungwa reClicos (Spain)
MuSpain kune zvakare rakatanhamara dziva rakafanana neHillier asi mvura dzayo hadzina kupenya pink asi yemaradhi girini. Iyo inozivikanwa seGungwa reClicos uye iri kumadokero kwemahombekombe eguta reYaiza (Tenerife) mukati mepaki yepanyama yeLos Volcanes.
Chii chinoita kuti dziva iri rive rakasarudzika nderoruvara rwegirizi remvura yaro nekuda kwekuvapo kwenhamba huru yezvisikwa zvezvimiti mukumiswa. Gungwa reClicos rakakamurwa kubva pagungwa negungwa jecha uye yakabatana nayo nepasi pevhu kutsemuka. Inzvimbo yakachengetedzwa saka kushambira hakutenderwe.
KuIndonesia kune nzvimbo inozivikanwa seichi chitsuwa cheFlores uko Kelimutu volcano, ine madziva matatu ane mvura inoshandura ruvara. kubva kune turquoise kusvika kutsvuku kuburikidza nerima bhuruu uye shava. Zvinoshamisa zvechokwadi? Icho chiitiko chakakosha kuona icho chinoitika nekuda kwekubatanidzwa kwemagasi nemhute zvinobuda kubva mukati megomo uye zvinogadzira akasiyana makemikari maitiro kana tembiricha yakakwira.
Kunyangwe iri gomo rinoputika, kuputika kwekupedzisira kweKelimutu kwaive muna 1968. Pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX, nharaunda yayo yakanzi paki yenyika muIndonesia.
Inowanikwa muAlberta's Banff National Park iri Moraine Lake, lagogi rakanaka remakomo echando ane mvura zhinji yebhuruu inouya kubva mukunyungudika.
Nharaunda yaro yechisikigo inoshamisa chose sezvo yakakomberedzwa nemakomo marefu eRockies muMupata weGumi Peaks. Nezviratidzo izvi, mapoka evafambi anokwira kuMoraine Lake kunotora maonero. Mvura yaro inopenya nekusimba mukati mezuva, apo mwenje wezuva unorova nyanza zvakananga kudaro zvinokurudzirwa kutanga watanga chinhu mangwanani kuti uzvione, apo mvura inoita senge yakajeka uye inoratidza mamiriro akanaka ayo akaumbwa mukati.
Kunze kwe moraine lakeMune imwechete Banff National Park mune Peyton uye Louise madziva, zvakare akanaka.
Nyanza Natron (Tanzania)
Inowanikwa pamuganhu pakati peTanzania neKenya, Gungwa Natron Iri idziva remvura yemunyu rakavharika, pamusoro peGreat Rift Valley. Nekuda kweiyo sodium carbonate uye mamwe mamineral macomputer anoyerera achipinda mudziva kubva kumakomo akapoterera, mvura yaro ine alkaline ine pH inoshamisa ye10.5 nekuda kweiyo sodium carbonate uye mamwe macomputer macomputer.
Iyo inokonzeresa mvura zvekuti inogona kukonzeresa zvakanyanya kupisa kumeso uye ganda remhuka dzinoenda pairi, dzinogona kufa nehupfu. Saka, Lake Natron yakasimudzwa ine zita revanonyanya kufa munyika.
Asi maererano nechitarisiko chayo chekunze, iri lagon rinowana rakasarudzika tsvuku kana pingi ruvara, dzimwe nguva kunyangwe orenji munzvimbo dzakadzika, nekuda kwehutachiona hunogara muganda rakagadzirwa nemunyu wealkaline. Zvinoshamisa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tora kunyura mudziva repingi, Lake Hillier